Semalt dia manoro hevitra amin'ny alàlan'ny angon-drakitra voalamina kalitao mba hahazoana bokotra bebe kokoa
Tamin'ny volana septambra 2019, Google dia namoaka lafiny iray amin'ny motera fikarohana azy izay manasokajy manokana ny andiany data. Zavatra roa no omena antsika: loharanom-pahalalana mazava momba ny angon-drakitra ilaina ho an'ireo izay mikendry ny hanonganana ny fitakiany sy ny paikady fitadiavana fikarohana mety hitranga. Na inona na inona kendrena anao dia manana vahaolana ho anao izahay.
Inona ny data voalamina?
Ny angon-drakitra voalamina dia endrika iray izay tian'ny Google rehefa mikaroka datasets. Ny fomba fandaminana fandaharana dia ao amin'ny schema.org , izay ahafahanao miditra amin'ny lisitry ny tetika hamantarana ny fomba fandaharana mifanaraka amin'ny sokajy misy anao. Raha toa manintona loatra izany, dia handinika amin'ny antsipiriany hafa isika any aoriana any. Voalohany eto ambany ny lisitry ny terminolo izay hampiasainay.
Schema - sokajy fananana miova arakaraka ny lohahevitra noresahina.
Anisan'izany ny lavaka, ny famoronana, ny vokatra ary ny toerana.
Dataset - ny mombamomba ny schema.
Ny asa famoronana dia hanana mpanoratra, mpamoaka lahatsoratra ary manana abstract.
Microdata - Ity no takelaka ampiasaina ao amin'ny HTML mba hamaritana ny karazana daty.
Ny "Mpanoratra" dia izy irery no mety tag
Manamarika - Rehefa mampihatra ny microdata amin'ny daty misy anao ianao
ITEMSCOPE - Ny marika HTML amin'ny fametrahana schema
ITEMTYPE - Ny marika HTML amin'ny famaritana ny karazana schema
ITEMPROP - Ny marika HTML amin'ny famaritana ny fananana an'io zavatra io.
Itemprop = "mpanoratra"
Raha tsy mahalala na inona na inona momba ny HTML ianao dia fantaro fa ny famaritana telo farany dia ao anaty kaody. Ho hitanao matetika izy ireo rehefa mieritreritra datasets sy skema. Tsy mila hainao ny HTML hahalala an'io lahatsoratra io.
Raha hainao ny HTML, dia ho hitanao fa toy ny fototry ny fampiharana schema amin'ny kaody anao. Ny skema dia ahafahanao mandamina ny votoatinao ho eken'ny milina fikarohana Google ho toy ny daty. Ity fampiharana schema ity dia hitondra fifamoivoizana amin'ny tranokalanao raha tanterahina tsara.
Ahoana no fomba hampiasako io data io amin'ny tranokalan'ny tranokalaniko?
Hiverina amin'ny fametrahana ny votoatinao amin'ny maha dateva azy ao amin'ny blog izahay. Voalohany, tonga hampiasa ity motera fikarohana ity ho loharano ho anao hampihatra amin'ny tranokalanao. Mora kokoa ny mamerina ny angon-drakitra izay efa misy noho ny mamorona data miavaka.
Rahoviana aho no mila miady saina momba ny zon'ny mpamorona?
Raha mahatadidy ny andron'ny oniversite ianao, ny fitanisa ny loharano dia ny lakilen'ny fampiasana data hanatsarana ny hevitrao. Rehefa mikasika ny famokarana votoaty izy ireo, ny ankamaroan'ny fitsipika mitovy dia mihatra raha manome azy ireo trosa ianao. Ohatra, tsy azoko nolazaina aminao fa nanoratra tantara tany am-boalohany aho izay tsy dia mahalala loatra ilay sary misy ny tantara IT nataon'i Steven King.
Ny fikarohana Google Dataset dia misy todigny fikarohana izay mametra azy io amin'ny fampiasana ara-barotra sy amin'ny fampiasana tsy misy varotra. Raha ny tanjonao dia ny hanoratra bilaogy iray mifandraika amin'ny marika iray mba hivarotra, dia ilaina aminao ity fizarana ity. Raha tsy fantatrao ianao dia misalasala manantona bilaogera na orinasa mifandraika amin'izany. Ho tian'izy ireo ny fidiranao, ary mety hisokatra ho anao indray izany.
Inona no tokony hotadiaviko amin'ny Google Dataset?
Izay tokony hotadiavinao dia miankina amin'ny niche anao. Andao atao hoe miezaka ny manisy teboka amin'ny CEO tsy mitady tombontsoa ianao. Mety hieritreritra ianao fa nahazo karama be loatra. Noho izany mitady ny asa soa ianao amin'ny vokatra kely. Saingy ny fanararaotana ny "fijerena lohahevitra" dia manampy anao hanalefaka izany. Eo amin'ny sary eto ambany ny antsipirihany.
Andao lazaina fotsiny hoe mila latabatra misy lisitry ny fiantrana izay miasa ao Angletera ianao. Azonao atao koa ny mandamina angon-drakitra amin'ny endrika. Amin'ity tranga ity dia misafidy ny safidy format ianao ary misafidy "latabatra." Ho an'ity iray ity, fantaro tsara ny fampiasana an'io fampiharana io.
Misy loharano hafa ve rehefa mampiasa fikarohana Google Dataset?
Ny olona izay mijery ny bilaogin'i Google no hiditra haingana amin'ny vaovao. Azonao atao ihany koa ny manaraka ny bilaogin'i Semalt , izay hijery akaiky ny fomba hanovan'ny tontolon'ny SEO ity. Google dia manana FAQ ihany koa.
Raha nanisy singa mampientam-po amin'ny Google search engine i Google, ny tanjon'ny Semalt dia mijanona hatrany hamonjy anao ho eo an-tampon'ity tontolo ity. Amin'ny fizarana manaraka dia handalo ny fomba ahafahanao mampihatra ny datasetsinao amin'ity motera fikarohana ity ianao. Ny fampiasana an'io angon-drakitra voalamina io dia fotoana vaovao ho an'ireo izay mikatsaka ny hampitombo ny fahitana azy ary mahazo tsindrio bebe kokoa.
Ahoana ny fomba hanamarihana ireo pejinao Dataset
Mba hanamorana ny zavatra dia hanome dingana dingana dingana hanampy anao amin'ny fanamarihana ny pejinao takelaka. Hanome anao loharanom-pitaovana vitsivitsy hanampy anao amin'ny alehanao izahay. Ity ambany ity ny lisitra iray izay mamaritra ny ho tohintsika.
Farito ny lohahevitrao (schema).
Aoka ho fantatrao izay mendrika ho daty.
Ny fikarohana momba ny angon-drakitra mifandraika sy tsy manam-paharoa.
Avoahy ny HTML ilaina.
Famaritana ny lohahevitrao
Ny famaritana ny schemao no dingana voalohany amin'ny famokarana andiana data. Ny lisitry ny Schemas dia ao amin'ny schema.org. Tsy misy afa-tsy pejy iray isaky ny schema ihany. Ka tsy hampihatra pejy eo amin'ny schema ianao, fa hampiditra lahatsoratra blog.
Noho izany dia mampiasa bibilava eo an-toerana izahay. Rehefa avy nanao fikarohana vitsivitsy tao amin'ny tranokala ianao dia nanapa-kevitra fa tianao ny ho tonga toerana eo an-toerana ao amin'ny kaontinao. Aoka hatao hoe manakarama olona ianao mba hanangona vaovao momba ny vidin'ny omby tenderloin ao an-tanànanao. Amin'ny fanatanterahana ny fikarohana dia azonao atao ny mampiasa an'io daty io ho an'ny olona izay mitady an'io amin'ny faritra misy anao.
Ahoana no hanampiany ahy io?
Mampitombo ny fifamoivoizana tranonkala ary hampivoatra ny tranokalanao ho loharanom-pahalalana azo itokisana. Azonao atao koa ny mampiasa an'io fampahalalana io amin'ny dokambarotra amin'ny ho avy. Azonao atao ny milaza fa manana ny tenderloin hen'omby mora vidy ianao raha oharina amin'ireo bara 100 manaraka ao an-tanànanao. Aza adino ny manaja ny hafa amin'ny fampiharana io fampahalalana io.
Aza adino ny zavatra takiana amin'ny maha-mpanoratana azy
Ny fomba tsara indrindra hahitan'ny olona momba izay mendrika ho toy ny kaonty amin'ny alàlan'ny fikarohana. Ny FAQ fampandrosoana an'i Google dia manana ohatra vitsivitsy ihany , saingy te-hanitatra isika amin'ny lisitra. Ohatra iray izay tiako hifantohana dia ny "izay rehetra toa ny fitsipi-pifandraisana." Tena mahery ny fitaovan'ny fikarohana an'i Google raha mbola afaka mizaha datasets ianao.
Raha maka ny ohatra nataontsika teo aloha, dia afaka manamboatra ny antontan-taratasy "vidin'ny henan'omby indrindra ao an-tanàna" izahay ary nametraka azy io amin'ny latabatra excel, latabatra tranokala namboarina, a .pdf, a .xml, a .docx, ary vitsy hafa izay azo vakiana amin'ny google an'ny AI. Azonao atao mihitsy aza ny mampiasa sary mety tsara. Ny tabilao bara sy ny tabila-tsipika dia mora entin'ny Excel avokoa.
Ny datasets dia hankasitraka ny vaovao izay tonga amin'ny alàlan'ny fahadiovana sy ny matihanina. Raha toa ka voahaingo ny tranonkalanao hamokatra karazana latabatra sy daty misy azy, ny Google dia hampiasa izany fampahalalana izany hanatsarana ny fikarohana momba ny fikarohana. Ary koa, ny mpitsidika dia afaka manana karazana fianarana isan-karazany. Ny famokarana atiny maimaimpoana amin'ny endrika media isan-karazany dia hanampy ny mpamaky hahatakatra ny hevitrao.
Fanadihadiana ireo angon-drakitra tsy manam-paharoa sy mifandraika
Ny lakile ho an'ny SEO sy ny datasety dia mamorona votoaty tokana tsy manam-paharoa izay mandrakotra ireo teny fanalahidy ao anaty faritra manokana. Toy izany koa ny momba ny schemas sy datasets. Amin'ny famoronana zavatra miaraka amina endrika mahazatra, dia manjary mora kokoa ny fandaniam-bola ny mpamaky. Angon-drakitra tsy manam-paharoa dia izay hitazonana azy ireo.
Ho an'ny fivarotana omby dia mety mila miantso manodidina izy na handeha tranonkala roa hanolotra ireo data. Mila azo refesina sy vokarina ny angon-drakitra. Amin`ity tranga ity, dia mora tahaka ny mijery sy miantso raha ilaina. Raha mitady ny hevitry ny olona ny orinasanao ianao, omeo refesina hatramin'ny iray ka hatramin'ny dimy izy ireo. Azonao atao ihany ny mampiasa fandinihana imasom-bahoaka amin'ny Google, saingy tsy mora ny angonin'ireo angon-drakitra.
Ity fampahalalana ity dia manampy anao hameno ny datinao. Na izany aza, ny fampiasana hafa dia misy ny fanatsarana ny orinasa sy ny fanairana ny olana. Raha manatanteraka ireo valin-kevitra ianao, dia tsy ho hitanao fotsiny hoe tsy ampy amin'ny faritra iray ianao, fa fanatsarana izany. Mety mila manova ny lohahevitrao ianao raha te hameno daty.
Avoahy ny HTML ilaina
Ny famokarana HTML dia dingana ara-teknika izay afaka maka fotoana betsaka. Ny bala izay nolazainay teo ambony dia mety hampisafotofoto izany raha tsy manana traikefa amin'ny HTML na fiteny fandaharana ianao. Azonao atao ny manakarama talenta vaovao mba hanampiana anao.
Ny talenta ohatr'izany dia ao amin'ny tranokala freelancing. Ohatra malaza amin'izany dia mety ho an'ny Toptal, Upwork, ary Freelancer.com. Manandrama ary mitadiava olona iray efa za-draharaha teo amin'ny saha. Raha mbola tsy nanisy marika teo amin'ny daty iray izy ireo dia mety tsy ho fantatr'izy ireo izay ataony. Raha hainy ny zavatra ataony, dia avereno jerena ireo ITEMPROP amin'ny scema amin'ny kendrenao mba hahafahanao mamerina mijery ny HTML amin'ny fahalalana sasany.
Maro ny freelancer no hitondra fomba fijery vaovao amin'ny orinasa misy anao. Aza adino ny mifikitra amin'ny fijerin'ny orinasa anao. Ankoatra izany, ny mpitsikemba dia mety hanakorontana amin'ny SEO anao. Aza adino ny manadihady momba an'i Semalt raha manana fanontaniana momba ny soso-kevitrao momba ny fampiharana daty amin'ny tranokalanao ianao.
Azo apetraka amin'ny pejiko ve ny Dataset Worth?
Ny valin'io fanontaniana io dia miankina amin'ny tanjonao ankapobeny. Ny fananganana tranonkala, na bilaogy, mifototra manodidina ireo takelaka fampahalalana sy lahatsoratra izay misy datasety tokana dia mitaky asa be. Ny orinasa madinika dia mety hamatsy vola betsaka mihoatra ny drafitra nataony. Ny haavon'ny fotoana sy ny ezaka ary ny vola azo amin'izany dia mety ho tafahoatra.
Na izany aza, ny famoronana tobim-panazavana manodidina ny orinasanao izay manana rohy tsy tapaka amin'ny tranokalanao dia zava-dehibe amin'ny paikadin'ny bilaogy mafy orina. Ny fampiharana izany fampahalalana izany amin'ny datin'ny daty dia mampitombo ny fahatokisan-tenanao. Ny fikarohana ao amin'ny angona Google dia nitombo ny isan'ny taha-pikarohana maromaro avy amin'ireo vondrona fikarohana akademika vokatr'izany. Ny fametrahana ny votoatinao eo anilan'izany dia manome tosika anao haingana.
Fitsapana momba ny motera Dataset an'ny Google
Mety hieritreritra ianao fa natao tsara kokoa ho an'ny vondrona akademika sy tranokala miorina. Saingy, orinasa japoney iray antsoina hoe Rakuten no nampiasa an'io serivisy io hampiroboroboana ny Rakuten Recipies. Ny fampiasana ny angon-drakitra voalamina dia nampitombo ny fifamoivoizan'izy ireo amin'ny 270 isan-jato.
Ity paikady ity dia tsy miverina mitaky ny hahitanao ny tenanao ao amin'ny milina fikarohana an'ny kaonty. Indraindray dia mitondra anao ho anisan'ireo snippets nasongadina ianao. Ny snippets nasongadina dia zavatra horesahantsika amin'ny antsipiriany ao amin'ny bilaogy iray hafa.
Ahoana no hanampian'ny angon-dramatoa voalamina ho any amin'ny tampon'ny Google?
Ho an'ny ankamaroan'ny orinasa, ny angon-drakitra voalamina dia fomba hanatsarana ny SEO anao amin'ny alàlan'ny fampiasana datasety sy ny format efa misy. Ho an'ny hafa afaka manadihady angon-drakitra be dia be izany. Amin'ny alàlan'ny fanaovana fikarohana sy ny fahafantarana ny fomba ifandraisan'ny tranokalanao amin'ity tranonkala ity, dia manome ny fotoana tena tsara indrindra ianao. Amin'ny alàlan'ny fifanakalozan-dresaka miaraka amin'i Semalt, ho hitantsika raha mety ny hampiasa izany amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny Google.